Raha ry mpihevotrevotra sy ry mpikiravaty manga mantsy no andrasana eto na ho ripaka eto aza isika mianakavy tsy misy hirarahany an’izany. Ny frankofonia izao no mahadodona azy ka zarany aza misy an’ireny tranga ireny hanariana dia antsika tsy hisaina sy hanakiana io amboletran’izy ireo io. Na izany aza, ny fo ranomafana ve no hamotehana fananana iombonana sy handatsahana ny ain’ny mpiray tanindrazana ry jean a ! Saika manerana ny nosy ve r’ise dia ahenoana korontana sy fifamonoana avokoa. Raha mba nieritreritra ny tenanay fa mba ho zava-mahafaly sy mahafinaritra indray no ho heno ato ho ato dia mbola ny omaly tsy miova e ! Aleo ihany ry Jean manindry fo fa isika samy isika ihany ve no hifandatsaka aina eto a ! Sady hifamono ve ry jean no mbola hanao fanabeazana aizana ka hisy olona intsony ve eto afaka 50 taona a ! Aleo mifandamina fa raha ireo andevozim-pahefana sy matim-boninahitra ireo no andrasana dia tsy hisy olana hivaha eto fa mety hifandripaka eto isika mianakavy. Tsara ny miray hina fa aleo amin’ny tsara e !